पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा यस्तो डरलाग्दो डढेलो, मन्दिरसम्मै पुग्न सक्ने! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा यस्तो डरलाग्दो डढेलो, मन्दिरसम्मै पुग्न सक्ने!
ताप्लेजुङ — पाथीभरा क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ ।
फेदीको बस्तीदेखि करिब ३ किलोमिटर पूर्वको जंगलमा डढेलो लागेको हो । यो मन्दिरसम्म नै पुग्ने सम्भावना रहेको माथिल्लो फेदीका बासिन्दाले बताए । माथिल्लो फेदीको बस्ती भने डढेलोको जोखिममा नरहेको माथिल्लो फेदीका राजेन्द्र महतले बताए ।